Inodzorwa Mechanical Ventilation, inoshanda uye ine hutano system | Bezzia
Inodzorwa Mechanical Ventilation, inoshanda uye ine hutano system
Maria vazquez | 08/05/2021 10:00 | Musha
Nzira yatinofema nayo yakakosha mukuchengetedza hutano hwakanaka hwedzimba dzedu. Kuona kunaka kwakanaka kwemweya watinofema inofanirwa kuve yekutanga kune mumwe nemumwe wedu, ndosaka tichiona zvichikosha kutaura pano nezve inodzorwa michina yekufefetedza system.
El inodzorwa zvemagetsi kufefetedza system, iyo iri muzvinyorwa zvakawanda inonongedzera neiri muchidimbu VMC, inotibvumidza isu nekuita kweanoburitsa fan kuvandudza mhando yemhepo yemukati uye kudzikisa kushandiswa kwesimba mudzimba medu. Sei?
1 Chii chinonzi Controlled Mechanical Ventilation?
2 Zvakanakira iyo system
3 Chinhu chakakosha mudzimba dzinongoitika chete
Chii chinonzi Controlled Mechanical Ventilation?
Iyo inodzorwa michina kufefetedza system ndiyo imwe mune iyo inoshandisa chiitiko che fan fan kumutsiridza mweya weimba. Iyi fan yekuburitsa inobvumidza kuunza uye / kana kubvisa huwandu hunodiwa hwemhepo kubva kumba, zvisinei nedzvinyiriro uye tembiricha mamiriro emhepo yekunze.
Panguva yekuita izvi, mweya unounzwa uye uyo unosiya mukati memba yedu inoendeswa kuburikidza nemasekete akapatsanurwa nekuda kwechikamu chekudziya kupisa. Dzinosangana zvisina kunangana asi hadzisanganisi, nokudaro dzichidzivirira simba riri mumhepo yemukati muchimiro chekupisa kana kutonhora kubva pakurasika.
Pane maviri masystem eanodzorwa emuchina kufefetedza: Iyo imwechete-kuyerera sisitimu, ine michina yekubvisa uye yakasikwa kubvuma, uye iyo mbiri-kuyerera system, ine michina yekubvisa uye kubvuma. Maitiro ese ari maviri anokonzeresa kufamba kwemhepo kubva kunzvimbo dzakaomeswa kusvika kumatota kudzivirira kusvibiswa kunogadzirwa munzvimbo dzakanyorova kubva pakupararira kune imwe imba yese.
Iyo mbiri inoyerera system zvakare acoustically inoparadzanisa imba uye inopa yakanyanya kupisa kupisa. Sei? Nekuti iyo façade yeiyo kuyerera system inogara ichitsiva iyo inlet yemhepo ine yekumanikidza grilles, nokudaro ichiwana yakanyanya kushanda.
Zvakanakira iyo system
Kuita Maitiro Anodzorwa Mechiniki Ventilation (VMC) masisitimu anovandudza mhando yemweya wemba yedu. Mukana unounza vamwe vazhinji vanobatana nawo unokanganisa mashandiro uye hutano hwemisha yedu uye ndosaka tichitenda kuti zvakakosha kutaura.
Inovandudza yemukati mhando yemhepo. Iyo inovimbisa inodiwa yekuvandudzwa kwemhepo nguva dzese.
Tidzivirire kubva mukufema mweya wekare. CO2 kukosheswa mumhepo yakasviba yakabatana zvinoenderana nemishumo yakasiyana siyana kuzvirwere zvekupemha zvakawanda, pamwe nemusoro uye kusatarisira.
Inoita vhura hwindo zvisina basa kuvandudza mhepo. Nenzira iyi, unogona kudzivirira ruzha rwemumigwagwa panguva dzakakosha senge basa kana maawa ekuzorora.
Inovandudza hutano hwechivakwa. Kufefetedza kwakashata kunowanzo kutungamira kune hunyoro kana kuumbwa. Sei? Nekuti kana isina mweya, mvura iri mumhepo haiburitswe.
Inoderedza kushandiswa kwesimba. Iko kuchengetedzwa kunopihwa neanodzokesa kunoita kuti zvikwanise kukwidzirisa mhedzisiro yesetifiketi remagetsi uye nekudaro zvinopa kusimba kukuru kumabasa epasi pekushandisa dzimba.
Chinhu chakakosha mudzimba dzinongoitika chete
Kekutanga nguva yatakataura masisitimu aya muBezzia yaive mune chinyorwa chakatsaurirwa kujekesa iyo musiyano uripo pakati pedzimba dzinongoitika nedzisiri zvipenyu. Isu takabva tadoma inodzorwa michina yekufefetera masystem seimwe yeakawanda nzira dze bioclimatic kiyi yekudzora kudiwa kwesimba rinoshanda zvakanyanya sezvinobvira.
Muimba yekungotarisa, iri pakati pe80 ne90% yekushanda kwayo yakavakirwa pane yakanaka bioclimatic dhizaini dhizaini. Strategic inobatsira kuchengetedza mamiriro akasimba emukati -kupisa, hunyoro ... - neiyo kushandiswa kushoma kwesimba kwesimba. Handizvo here zvatinoda tese?
Kuderedza tsoka yedu yezvakatipoteredza nekumisikidza shanduko yemamiriro ekunze chinhu chatinofanira kushandira. Uye isu tinogona kuzviita, zvakare, kubva kumunda weapurani uye dhizaini. Uri kuenda kuzvivakira iwe imba here? Verenga chinyorwa chambotaurwa uye ufunge nezve marongero aunogona kuita mune ino.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Musha » Inodzorwa Mechanical Ventilation, inoshanda uye ine hutano system
Mhando dzekunze pasi pevheranda rako kana terati